Wararka - Falanqeeyaha Canopy si loo xaqiijiyo abuuritaanka dhow ee caqliga leh ee dalagyada
Falanqeeyaha dusha sare si loo xaqiijiyo abuuritaanka dhow ee caqliga leh ee dalagyada
Falanqeeyaha Canopy wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa koritaanka dalagyada, waana muhiimad weyn in la xaqiijiyo abuuritaanka dalagyada macquulka ah. Canopy waa qayb ka mid ah dalagyada laga arko kor ilaa hoose, taas oo u eg koofiyad. Baarayaasha badanaa waxay kahelaan qaar "sir" ku saabsan dhirta. Qaadashada tusaale ahaan galleyda, qaab dhismeedka daaqa ee tirada galleyda soosaarka aad u sarreeya wuxuu muujin karaa farsamada jir ahaaneed ee sameynta waxsoosaar aad u sarreeya, waxayna bixinaysaa aasaas aragtiyeed ee waxsoosaarka sare ee dalagga. Si kastaba ha noqotee, si loo hubiyo saxnaanta cilmi-baarista, qalab xirfadeed waa in loo adeegsadaa cabbiraadda.
Waxaa laga yaabaa inaadan aqoon u lahayn dhismaha dahaadhka dhirta. Aan soo qaadano galleyda tusaale ahaan. Qaab dhismeedka daaqaddu wuxuu saameyn ku yeelan doonaa dhalidda iyo tayada galleyda, maxaa yeelay qaab dhismeedka daaqa wanaagsan wuxuu hagaajin karaa waxtarka leh sawir-gacmeedka caleenta galleyda, kaasoo waxtar u leh isu-urursiga tamarta iyo kobcinta koritaanka iyo horumarka. Falanqeeyaha dhirta dhirta ayaa adeegsanaya muuqaal muuqaal / u dhow infrared spectroscopy iyo tikniyoolajiyad fara badan oo kanaal ah, oo si dhakhso leh u go'aamin kara xuduudaha dusha sare ee dhirta iyo macluumaadka xajmiga, ka dibna falanqeynaya tilmaanta dhirta RVI, NDVI, waxyaabaha ku jira nitrogen dalagga, nitrogen uruurinta, tusmada aagga caleenka, miisaanka qalalan ee caleen iyo halbeegyada kale iyadoo loo marayo softiweer.
Adoo adeegsanaya falanqeeyaha dahaarka si loo cabbiro loona falanqeeyo daaqa dalagga, waxaan ku ogaan karnaa abuuritaanka galleyda galleyda ah ee macquul ah Beerista macquulka ah waxay si buuxda uga faa'iideysan kartaa iftiinka qoraxda, biyaha, hawada, kuleylka iyo nafaqooyinka, waxay isku dubaridi kartaa iska horimaadka u dhexeeya kooxaha iyo shakhsiyaadka, hubinta koritaanka caafimaadka iyo horumarka shakhsiyaadka ku saleysan hormarka kooxda, si loo hagaajiyo dhalidda halkii unug. ee galleyda.
Guud ahaan, falanqeeyaha daaqa ayaan waxyeello u lahayn koritaanka dalagga. Isticmaalkeedu ma yareyn karo oo keliya dhibaatada falanqaynta qaab dhismeedka daarta, laakiin sidoo kale wuxuu hagaajin karaa waxsoosaarka dalagga. Marka loo barbardhigo habka cabbirka dhaqameed, waxay ka fogaan kartaa cilladaha waxyeelada dhirta. Waxay leedahay faa'iidooyinka ku habboonaanta, waqti xaddidan ma leh, qadarka badan ee helitaanka xogta iyo wixii la mid ah. Waxay aad ugu habboon tahay cilmi baarista beeraha casriga ah Qalabka waxaa si ballaaran loogu isticmaalay beeraha, dhirta, beerashada dhirta la xiriira, taranka, isbarbardhigga tirada dhirta iyo horumarinta barista, shaqada cilmi baarista, waxay si wax ku ool ah uga caawin kartaa dadka in lagu beero cilmiyaysan, bacriminta, si dalaggu ugu xaalad koritaan oo wanaagsan.